Iindaba - Iimakethi zivulwe kwi-Yiwu
Emva kokuvulwa kweemarike ezinkulu ze-web, ngakumbi nangakumbi usaziwayo kwiwebhu usasazo ngqo kwimarike, abanye abanini-venkile, abancedisi beevenkile ngqo emfazweni, abarhwebi baba ziankile, usaziwayo wewebhu usasaze ngqo "ubambe" ishishini, ube sishushu eshushu yiwu intengiso.
Ukukhuthaza ukuhlanganiswa kwe-intanethi kunye ne-intanethi, isixeko sethu siququzelele imisebenzi efana ne "e-yorhwebo kwimarike", "izinto ezilungileyo kwi-intanethi", "udumo lwewebhu olusasaza intwasahlobo efudumeleyo", "umboniso we-intanethi", njl. urhwebo lwe-e-sixeko kwimarike, kwaye lwenze ukhetho oluchanekileyo lweemveliso, iiodolo kunye nentengiso ekwi-Intanethi. Abaqhubi beemarike baseta ivenkile kwiqonga le-e-commerce ukwandisa intengiso ye-Intanethi.
Isixeko sethu sitsala iqonga losasazo ngqo, ii-arhente zeenkonzo zosasazo zewebhu kunye nosaziwayo wewebhu owaziwayo kwi-yiwu, ukwenza usasazo ngqo ngezinto zentshukumo, kwiqonga losasazo elaziwayo, isikali se-arhente zenkonzo yosasazo lwewebhu, kunye nokuhamba kwayo " abadumileyo kwiwebhu ", kwirhafu, ukuthengwa kwetalente, ukuxhasa abantwana esikolweni. Iqela lemall liza kuba ngama-25,000 eemitha zesikwere "seziko", kwi-web celebrity phila ipaki yemizi-mveliso. Ngaphantsi kwesikhokelo somgaqo-nkqubo, abaqhubi beemarike batshintsha indlela yokusebenza, "usaziwayo wewebhu" ngempahla, ukuthengisa ngokusasaza ngokuthe ngqo nangakumbi.
"Ngexesha elikhethekileyo lobhubhane, kubaluleke kakhulu ukukhokela abaqhubi ukuba bavule amajelo amatsha anje ngokusasaza ngqo kwi-Intanethi, ukukhawulezisa ukubuya kwabathengi kunye nokunyusa ukuzithemba kwintengiso." Umntu ophethe eli qela leemall uthe ukuqhambuka kunyanzelise abanini bamashishini ukuba bakhawulezise inguqu, "urhwaphilizo kurhwebo lwangaphandle, uninzi lwabarhwebi lonyuse ukwandiswa kwemarike yasekhaya. Abanye babo babesenza kuphela ngoku, kodwa ngoku baqala ukuthathela ingqalelo le ndlela intsha yosasazo ngqo kwi-intanethi. "